बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र ‘प्रचण्ड’बीच छलफल - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र ‘प्रचण्ड’बीच छलफल
काठमाडौँ, २४ साउन ।
सत्ता पक्षीय गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसीरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बालुवाटारमा छलफल चलिरहेको छ ।
आजै सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । बैठकमा कार्यदलका सदस्यका साथै शीर्ष नेताहरूको पनि उपस्थिति छ ।आज दिउसो ४ बजे सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार संचालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्दै छ । सो सार्वजनिक गर्नुअघि उहाँहरुबीच छलफल चलिरहेको हो।
प्रचण्डले भने-सरकारले बाढी पीडितको राहतका काममा तीव्रता दिन सकेन
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सरकारले बाढी पीडितको राहतका काममा तीव्रता दिन नसकेको बताएका छन् ।
आइतबार बिहान आफ्नै निवास खुमलटार पुगेका बाढी पीडितहरूसँगको भेटमा उनले सरकारले सिन्धुपाल्चोकलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यसअनुसार कामलाई तीव्रता दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
बाढी पीडितसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अहिले सरकारले सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त जिल्ला त घोषणा गर्‍यो । तर त्यो घोषणालाई फलोअप गर्ने खालका क्रियाकलाप तीव्रतासाथ अगाडि बढ्यो कि बढेन भन्दा अझै पनि ती गतिविधि त्यहीअनुसारको तीव्रताका साथ अगाडि बढेको छैन ।’
प्रचण्डले सो क्षेत्रका बाढीपीडितलाई राहत दिलाउन आफ्नो पार्टीले सरकारलाई घचघच्याउने र उत्प्रेरित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि सो क्षेत्रका बाढीपीडितलाई सकेको सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
डेटिङमा डर किन ?
डेटिङ भनेको तपाईंको लागि उत्तम पार्टनर खोज्ने माध्यम हो। तर त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन्,...
नेपालीको लागि मलेसिया रोजगारी डिसेम्बर महिनासम्म नखुल्ने ?
मलेसिया, ६ असोज । कोरोनाको सुरुभए देखिनै विदेशी कामदारहरुको निम्ति मलेसिया प्रवेश पुर्ण रुपमा...
नक्कली कागजात बाेकेर अमेरिका हिँडेका ८५ नेपालीको जर्मनीमा हरिविजोग !
मलेसिया ३१ डिसेम्बरसम्म नखुल्ने, भ्रममा नपर्न मलेसियाली सरकारको आग्रह
मलेसिया हुनेले हेरौ: मलेसियाको घरफिर्ती योजना २७ दिन बाकी !
मलेसियाको लागि श्रमस्वीकृत सुरु कहीले देखी ?
भिषण वर्षामा परि १२ जनाको मृत्यु
एजेन्सी, २८ भाद्र । पाकिस्तानमा भिषण वर्षा भएको छ । सो वर्षामा परेर कम्तीमा...
ताजिकिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प, कम्तीमा पाँचको मृत्यु
६.१ म्याग्नीच्युडको भूकम्पको धक्का
बेलायतमा चार साता लम्बियो लकडाउन